Filoha Rajaonarimampianina : “Tsy ho raraka an-tany ny ran’ireo Malagasy nitolona” -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloha Rajaonarimampianina : “Tsy ho raraka an-tany ny ran’ireo Malagasy nitolona”
Ao anatin’ny fankalazana ny faha-70 taonan’ny tolom-panafahana, nisy fihaonam-pikarohana ara-tsiantifika iraisam-pirenena nandalinana ny tena zava-niseho marina tamin’ny 29 Marsa 1947, omaly teny Tsimbazaza. “Firenena Malagasy afaka sy mahaleotena”, io no lohahevitry ny fihaonana. Nosafidiana manokana ity lohahevitra ity mba hahafahan’ny rehetra mahafantatra ny tantaram-pirenena satria tsy misy firenena mandroso raha tsy mahafantatra ny tantarany ny vahoaka ao aminy. Ankoatra ny mba hahafantarana ny zava-nisy marina dia natao ihany koa ny mba hiraisan’ny Malagasy hevitra momban’ ny tantara tamin’ny 1947 ny fotoana omaly. Betsaka noho izany ireo tahirin-kevitra nivoaka momba iny tantara iny raha ny nambaran’ny filohan’ny Akademia Malagasy.
Maro ireo olona sy fikambanana nanatrika ny fihaonam-pikarohana ary anisan’izany ny Filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Hery. Ity farany izay nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ny fotoana teny an-toerana ary nandritra ny fandraisam-pitenenany no nanambaran’ny Filoha fa mbola maro ny zava-miafin’ny tolom-panafahana ny andron’ny 29 Marsa 1947. Na dia eo aza anefa izany, “Tsy ho raraka an-tany ny ran’ireo Malagasy nitolona ho amin’ny fahafahana tamin’izany andro izany hoy ny Filoha fa efa manohy miady ho amin’izay fahafahana tena izy ny fitondram-panjakana mijoro ankehitriny”, hoy ny Filoham-pirenena. Niantso ho amin’ny firaisan-kinan’ny rehetra noho izany ny Filoha mba hifanome tanana ho fanatrarana izay tanjona hiombonana izay satria ao anatin’ny fampiroboroboana ny fampandrosoam-pirenena amin’ny alalan’ny fitiavan-tanindrazana ara-toekarena izany. “Noho izany, manana adidy amin’ny fankasitrahana sy fahatsiarovana ireo tia tanindrazana tamin’izany fotoana izany ireo taranaka amin’izao fotoana izao, amin’ny fanamafisana ny firaisan-kinam-pirenena sy fiarovana ny kolontsaina sy ny drafitra sarobidy ny firenena”, hoy hatrany ny Filoha Rajaonarimampianina Hery.
Ohatran’ny tranga rehetra mitovy tamin’ny niseho tamin’ny taona 1947, ny fikomiana teto Madagasikara dia vokatry ny fitakiana fahafahana sy fahaleovantena. Ny zava-nisy niainana taorian’ny fikomiam-bahoaka, ovain’ny olona sasany (vahiny fa misy koa ireo Malagasy) ho politikan’ny firenena amin’izay tiany. Tranga fahita sy fantatra teo amin’ireo fitondrana nifanesy nitondra ny firenena malagasy izany, araka ny fanambaran’ny Filoha, ka ilaina ny fanarenana ny marina mahakasika ity tantara ity. “Amin’izao fotoana izao, tokony hialana ny fomba fisainana fa ny fanjakana dia fitaovana politika natao ho an’ny mpitondra”, hoy ny Filoha namarana ny teniny. Ao anatin’ny famerenana ny marina tamin’ny tolom-panafahana ny 1947, mangataka ny hanokafana ny tahirin’ny frantsay momba ity tantara ity ny Akademia Malagasy.